KQ Series Factory - China KQ Series Abakhiqizi, abahlinzeki
Ukunethezeka kwesisebenzi akuyona into encane. Ucwaningo lukhombise kaningi ukuthi abasebenzi abayi- ukungakhululeki ngokomzimba kuyaphazamiseka futhi bathambekele ekwenzeni amaphutha.Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ezimweni zokungakhululeki okukhulu, njengalapho ukukhathala kokushisa, isifo sohlangothi nezinye izinhlobo zesiteleka sokucindezela ukushisa.
Abalandeli be-12 FT HVLS Industrial Factory Cooling Fans
Izinsiza zezimpahla zidinga isivinini nezikhala. Lolu hlobo lomsebenzi nethrafikhi lwenza ukushisa ezindaweni ezihlukahlukene. Lokhu kwanda kokushisa kudlangile, ikakhulukazi ehlobo elishisayo izinyanga lapho izinsiza kusebenza zinamachweba avulekile nokuvuleka okuhambisa ukushisa kungene isikhungo. Izindawo zokugcina impahla nezokusebenza zingasiza ekuhlukaniseni ungqimba lomoya nokuhlangana ungqimba lokushisa olwenziwe ophahleni. Ukuxuba komoya ngokusakazwa kwalokhu umphezulu usiza ukunciphisa kakhulu ukushisa futhi uqede ukushisa okunqwabelana ngaphakathi izakhiwo ezinkulu.
Abalandeli be-16Ft HVLS Giant For School
Namuhla ezikoleni nasemakolishi Imvelo yekilasi iba nomsindo ngama-Air Conditioners noma amaSmall abalandeli abanomsindo. Lo msindo futhi uphazamisa abafundi ngenkathi befunda futhi ubenza bangakhululeki funda. Ngokusebenza buthule, i-OPT HVLS Fan yenza imvelo yasekilasini ibe ntofontofo, lokho wonke umfundi angazwa futhi agxile ekufundweni kwasekilasini.
Abalandeli be-18FT HVLS KQ Big Heater Heater
Abalandeli be-OPT HVLS bangasetshenziswa kuphela ehlobo ukupholisa nokungenisa umoya, kepha futhi basakaza umoya ofudumele oqhuma kwi-heater .Ikholomu yomoya ehamba kancane ithwala umoya ofudumele usuke ophahleni uye ezingeni eliphansi….
Abalandeli be-20FT HVLS Giant Ventilation
Idivayisi yokuphepha ye-OPT HVLS Ceiling Industrial Ventilation Fan: i-fan blade ngayinye ifakwe i-L-type security link buckle ukuvikela i-blade ezingxenyeni ezihlukene, futhi umkhono we-shaft shaft wenzelwe ukuvimbela i-chassis ejikelezayo ukuthi ingasheleli ngengozi. Zonke iziqobosho zifakelwe amantongomane okuzikhiya okuxekethile namaphakethe wokudonsa amise izinyo….
Abalandeli be-24 FT Best Outdoor Ceiling
Izindawo zokugcina izimpahla kanye nezinsiza kusebenza zivame ukuzungeza isithombe esikhulu sikwele esigcwele imishini
ery, abantu, kanye nokufakwa okukhanyayo okukhipha ukushisa. Lezi zindawo zingathinteka yisimo sezulu
izindawo, izinga eliphansi lomoya, namazinga okushisa aphikisayo, anganciphisa ukungasebenzi kahle kwamandla futhi
ukukhathazeka ngokuphepha kwezimenenja.